ခင်ဗျားတို့ တကယ်ရောလွတ်မြောက်ချင်ကြလား..? - Khitamyin
စစ်တပ်ကKIAကိုအပစ်ရပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကောလဟလလည်းတက်လာရော ညီကိုဗမာများရဲ့စိုးရိမ်သံတွေအများကြီးကြားရပါတယ် မြင်ရပါတယ်။
KIO/KIAသည်ပြည်သူနှင့်အတူလွတ်မြောက်လိုပြီး ပြည်သူ့တပ်မတော်စစ်စစ် စတန်းဒတ်အာမီစစ်စစ်ဖြစ်ချင်တာပါ။ ဒီတော့ KIO/KIAအပစ်ရပ်ခြင်း မရပ်ခြင်းကပြည်သူမှာပဲမူတည်ပါတယ်။
ကျနော်ပြည်သူတွေ တကယ်ရောလွတ်မြောက်လိုပါရဲ့လား? မေးခွန်းထုတ်ဆန်းစစ်ရမဲ့အချိန်ပါ။
ကျနော်အနေနဲ့တော့ တော်လှန်ရေးကိုအားမရလာတော့ပါဘူး …ဖေဘုတ်သုံးခြင်းသည်လူတိုင်း၏ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ် ကန့်သတ်ပြီးမပြောလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာနဲ့အရေးမကြီးတာကိုခွဲခြားနိုင်ရမဲ့အချိန်ပါ။
မနေ့ညက အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့liveမှာကြည့်ရှု့သူ၃သိန်းကျော်နဲ့လူစည်ကားနေတာဟာ တော်လှန်ရေးကိုပြက်ရယ်ပြုရာကျပါတယ်။ ကိုဗစ်လည်းပြီးအဲ့အမျိုးသမီးလည်းတဖန်liveလွင့်ပြလိုက်ရင် မြန်မာနိူင်ငံဟာငြိပ်ဝပ်ပိပြားနေသားကျသွားမဲ့အခြေအနေပါ။ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေကိုကြည့်ပြီးစစ်ကောင်စီဟာကျနော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်ရစေတာပါ။
အပျော်ပါလို့ စိတ်ထွက်ပေါက်ပါလို့ နှင့်သိမ့်မယူပါနဲ့ အချိန်အခါရှိပါတယ်။ စာရေးသူကျနော်ဟာလည်းအဲလောက်ထိကပ်တီးကပ်သပ်လိုက်အပြစ်မြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး..
US လေယာဉ်သဘော တွေမှာ ဟတ်စကီးနဲ့ ကောင်မလေးတွေဆင်းပြီးဖျော်ဖြေတာတွေတွေ့ဖူးမှာပါ။ တချိန် ချိန်တော့ အဲလိုကာလလည်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါတယ်။ခုကအချိန်မဟုတ်သေးဘူးလေ ခုချိန် ရန်ကုန် ၊မန္တလေး က PDFအဖွဲ့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြိုခွင်းခံနေရပါတယ်ါ ဖမ်းဆီးခံနေရပါပြီ။
ကျနော်အမြင်အရ အဲဒီကိစ္စရပ်တွေဟာ ပြည်သူအယောက်စီတိုင်းပူးပေါင်းပါဝင်မူအားနည်းလို့ဖြစ်ကြရတာပါ။ပြည်သူတွေအားစိုက်ရမဲ့နေရာ အာရုံစိုက်ရမဲ့နေရာတွေမှာအားမစိုက်လို့ဖြစ်ကြရတာပါ။
ဒလန်/သတင်းပေးအလွန်များပြားနေပါတယ် သတင်းပေးအားကစစ်တပ်ဖက်ကိုအလွန်အားသာနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေအိပ်ပျော်နိုင်လွန်းတယ်ဗျာ
တချို့အွန်လိုင်းဆယ်လီတွေ လိုရင်းကိုမရောက်နိူင်ဘူး ဆဲမယ် ထေ့ငေါ့မယ် မုန့်ဟင်းခါးခေါင်းစဉ်ရှာပေးယုံနဲ့တော်လှန်ရေးဟာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။
NUGနဲ့EAOS တွေပိုပြီးအယုံအကြည်ရှိလာဖို့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးရပါမယ် စည်းရုံးနေရပါမယ်။
အခုကမရေးတဲ့အပြင် တချို့တွေ သတင်းပေးများလုပ်နေသလားလို့တောင်ထင်မိပါတယ်။ မန်းလေးကိစ္စ ခုရန်ကုန်ကိစ္စ တွေ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကPDFကိစ္စရပ်များဟာ အွန်လိုင်းဆယ်လီတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနောက် ဖြိုခွင်းခံရတာလားလို့မြင်မိပါတယ်။
ဥပမာတခုပြောမယ်ဗျာ အမေရိကန် CIAပဲထားပါတော့ ယိုးဒယားလိုနယ်စပ်မှာအထိုင်ချပြီး ကဲမင်းတို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုငါတို့လက်နက်ကူညီမယ် လာယူကြဆိုရင်တောင်.. အဲဒီအကူအညီတွေဟာ မြန်မာပြည်တွင်းထဲ အလုပ်ဖြစ်ဖို့အတော်ခဲယဥ်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Why? ? သတင်းပေးများလွန်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒလန်များလွန်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ CIAကကူညီလိုက်တယ် ပြည်မထဲရောက်ရင်အဖမ်းခံရတယ် အဲလိုပဲသမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်းဖြစ်နေမဲ့သဘောပါ။
ဒါကဘာကိုဆိုလိုလည်းဆိုတော့ တကယ့်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာ ကျနော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုဖက်မှာ ပါဝင်ကူညီသူအင်အားနည်းပါးလို့ဖြစ်ရတာတွေပါ။ CIAတောင်လက်မှိုင်ချရမဲ့အပေါက်မျိုးပါ။
KIO/KIAကတော့ သူနိူင်သလောက်ရုန်းမှာပါ တိုက်မှာပါ။ သူ့နောက်ကိုကျနော်တို့ပြည်သူတွေက တကယ်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ချဥ်းကပ်မူများ ကူညီပေးမူများ ဝန်းရံမူမျိုးလိုပါတယ်။
KIAကိုလည်းဝန်းရံ ကိုယ်တိုင်ရောဘာလုပ်နိူင်မလဲ အဖြေထုတ် ရှေ့ထွက်လာရမဲ့အချိန်ပါ။
ကျနော်တို့ပြည်သူတွေလမ်းအရမ်းများစရာမလိုပါဘူး…တကယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင် တကယ်လုပ်ကြပါ ပါဝင်ကြပါ။တကယ်တိုက်ကြပါ။တကယ်အာရုံစိုက်ကြပါ။
KIA/KNU/PDF တွေတိုက်တုန်း ကျနော်တို့တက်ညီလက်ညီဝိုင်းပြီးတော်လှန်ပစ်လိုက်ရအောင်ဗျာ ဒီစနစ်ဆိုးကိုချိန်းပစ်လိုက်ရအောင်ဗျာ
ကံကောင်းလို့ ကိုဗစ်မှာငါမသေခဲ့ဘူး နိူင်ငံကတော့အုပ်ချုပ်ချင်တဲ့အုပ်ချုပ်ပါစေတော့ အသက်ရှင်နေတာပဲကံကောင်းလှပြီဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကျနော်တို့ရှုံးပါပြီ။
ကျနော် ထင်ရာမြင်ရာတွေပါ ဝေဖန်အကြံပြုဆဲဆိုနိုင်ပါတယ်။